२५ वर्षदेखिका अस्थायी शिक्षक स्थायी बन्दै, यसै वर्ष लाइसेन्स परीक्षा लिइने - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । अढाई दशकभन्दा बढी अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षक स्थायी बन्ने भएका छन् । शिक्षक सेवा आयोगले तीनै तहमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न सुरु गरेको छ । २०५६ सालमा स्थापना भएयता आयोगले यसपालि एकै वर्ष करिब २७ हजार शिक्षक पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ । तीनवटै तहका गरी करिब १३ हजार अस्थायीका साथै १२ हजार ७ सय ३९ पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुँदै छन् ।
सबैभन्दा धेरै अस्थायी शिक्षक प्राथमिक तहमा छन् । प्राथमिक र माध्यमिक तहको नतिजा प्रकाशनक्रममा छ । ‘आयोगले विभिन्न तह, खण्ड र विषयगत गरी दुई सयभन्दा बढी विज्ञापनको पदपूर्ति गर्दै छ,’ आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसी थपलियाले भने, ‘मावि र प्राविको नतिजा प्रकाशन गर्न अझै केही समय लाग्छ ।’
मुग्लिन नारायणगढ सडक अवरुद्ध
चितवन। नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत दारेचोक गाविस–४ मुग्लिन बजार नजिकै पहिरो खसेपछि आज बिहान ५ः२५ बजेबाट […]
बढी ब्याजको लोभमा साँवा डुवेपछि
माघ १७ । पाल्पा, करोडपति बन्ने सपनामा ‘कमोडोटिज विजनेस’ मा अवैध लगानी गर्ने व्यक्ति अहिले फसेका छन् […]
अमेरिकाको विस्कोन्सिनमा राष्ट्रपतीय चुनावको पुनः मतगणना हुने
मिचिगन र पेन्सिलभेनियामा पनि पुनः मतगणना हुने सम्भावाना काठमाडौं । अमेरिकाको विस्कोन्सिन राज्यकाको निर्वाचन […]
सुन तस्करी र सनम हत्याका मुख्य आरोपी गोरेलाई किन राखियो गोलघरमा ?
काठमाडौं । ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ सहित तीन जनालाई काठमाडौं […]